Chọpụta osimiri kacha mma nudist dị na Tenerife | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Osimiri, Tenerife
La Agwaetiti Tenerife bụ otu n'ime ebe ndị kachasị chọọ Spen maka ihu igwe dị mma na-ekpo ọkụ n'ime afọ na maka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke osimiri nwere. Ọtụtụ n'ime ha bụ osimiri gba ọtọ ma na-enye gị ohere ịme nwayọ nwayọ mgbe ị na-anụ ụtọ anyanwụ ma nwee ezigbo igwu mmiri. Ọ bụrụ n ’ị gaa ileta agwaetiti a, ị ga - achọ ịmatakwu gbasara agwa ndị nwere mmiri na ihe ha na - enye.
na iferi osimiri nwere ike inye n'efu ma ọ bụ bụrụ oghere ebe a na-eme nudism amanye. Imirikiti n'ime ha na-enye gị ohere ịhọrọ onye ga-eleta ya, ịnụ ụtọ nhọrọ niile. Anyị ga-ahụ ihe agwaetiti Tenerife dị na Canary Islands nwere ike ịnye anyị n’ihe gbasara oke osimiri dị iche iche.
1 Tesọ osimiri La Tejita
2 Osimiri Los Morteros
3 Osimiri La Pelada
4 Ugwu Ugwu Uhie
5 Osimiri Patos
6 Osimiri Las Gaviotas
7 Osimiri Benijo
Tesọ osimiri La Tejita
La Tejita bụ aja aja nke na-aga n’akụkụ Ugwu Uhie, nke bụ otu n'ime ihe kachasị njirimara agwaetiti a nwere ike ịhụ site na ikuku. Osimiri a pụtara maka mmiri dị ọcha na maka ịbụ ebe a na-egwu mmiri, ebe ọ na-enwekarị ebili mmiri na ifufe. Saịtị a ghaghi ileta, obu ezie na enwere oke osimiri zoro ezo, mana agbanyeghị o putara maka odida obodo ebe o di na maka ibu otu n'ime ndi ama ama.
Osimiri Los Morteros
Osimiri a dị na obere ọdụ mmiri, yabụ ọ nwere mmekọrịta chiri anya ma nabata karịa ndị ọzọ buru ibu. Ọ dị nso na Mpaghara okike nke ugwu nke La Caleta na mmepe obodo nwere otu aha, nke bu ezigbo ebe izu. Agụụ a dịpụrụ adịpụ ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ndị ọzọ mana ọ na-atọ ụtọ ma dịkwa jụụ, ya mere ọ bara uru. Ọ bụ a na-echebe eke ohere na Ya mere anyị ga-ahụ onwe anyị na a mara mma nke ukwuu gburugburu ebe obibi ebe a ga-eme nudism. Na mgbakwunye, ọ na-enye kristal mmiri doro anya zuru oke maka nsị ma ọ bụ ndakpu mmiri.
Osimiri La Pelada
Agwaetiti a nwere ọtụtụ coves n'ihi mbuze nke oké osimiri na ugwu mgbawa ruo ọtụtụ afọ, ya mere, ọ na-enye anyị ọtụtụ ebe iji mee nudism n'ụzọ dị jụụ. Osimiri La Pelada dị nso na mpaghara El Médano na ọ bụ a obere cove n'etiti nkume na-ahụkarị nwa aja nke agwaetiti na a na ogologo nke banyere 80 mita. Ọ dị obere ma dị mma, ọ nweghị ọrụ mana ị nwere ike ịhapụ ụgbọ ala gị nso yabụ ọ nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọghị ịga ije nke ukwuu.
Ugwu Ugwu Uhie
A pụrụ ịhụ osimiri a mgbe ị rutere agwaetiti ahụ n'ihi na ọ dị nso ọdụ ụgbọ elu. ama m banyere ugwu mgbawa a na-akpọ Ugwu Uhie nke ahụ bụ n'ezie njirimara na nke pụtara ìhè na odida obodo. Osimiri a na-enye anyị ohere ịme nudism na gburugburu ebe obibi pụrụ iche anyị na-enweghị ike ịchọta na Peninsula, yabụ na anyị ekwesịghị ịla azụ ịbịaru ya. Cove nke a maara dị ka Playa de Montaña Roja bụ ebe chiri anya karị karịa osimiri La Tejita nke gbatịrị n'akụkụ ugwu ahụ ma mara nke ọma. Na ha abụọ ị nwere ike ịme nudism ọ bụ ezie na obere oghere a na mpaghara okwute na-anabata ndị mmadụ.
Nke a bụ a osimiri ọhịa weere otu n'ime ihe kachasị mma na Tenerife na-eme nudism. Mmiri doro anya, aja gbara ọchịchịrị na ugwu na-acha akwụkwọ ndụ na-apụta ma mepụta ngwakọta dị egwu nke agba dị egwu na pụrụ iche. Ọ dị n’akụkụ osimiri Ancón, nkewapuru kewaa. Osimiri Orotava a mara ezigbo mma mana ị ga-akpachara anya mgbe ị na-asa ahụ ugbu a n'ihi na ọ gaghị adabara ezinụlọ.
Osimiri Las Gaviotas
Ọ bụrụ na ị gafee osimiri Teresitas, nke a ma ama na agwaetiti ahụ, ị ​​ga-akwụsị na Playa de las Gaviotas, ebe a na-ahapụ ịgba ọtọ. Ọ gbara ya gburugburu ụfọdụ ikpọ ugwu na nudism bụ n'efu, nke ahụ bụ, anyị nwere ike iyi uwe mmiri ma ọ bụ na ọ bụghị. Nanị ọghọm bụ na ebili mmiri na ọ pere mpe, mana ọ bụrụ na anyị aga na mmiri dị ala anyị nwere ike ịnụ ụtọ ya nke ọma. Ọ dị naanị mita 250 n'ogologo mana ọ bụ ụsọ mmiri n'akụkụ ogige ndị njem na mpaghara dị jụụ, ọ bụ ya mere ọ ga-eji bụrụ nke zuru oke iji nwee obi ụtọ ụbọchị n'ụsọ osimiri.
Osimiri a mara ama n'ezie ma pụta ìhè nke Roque Benijo na Roque la Rapadura. Ọ bụ onyinyo a maara nke ọma na Tenerife yana osimiri ọzọ maka ịgba ọtọ. Osimiri ohia nke nwere aja ojii na otutu ebili mmiri nke anyi na-agaghi echefu mgbe anyi jere agwaetiti a. Ọ bụkwa ebe zuru oke iji nwee ezigbo ọdịda anyanwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Tenerife nudist osimiri